जापानमा प्रयोग गरिएका किताबमा पाइने असामान्य, कहिलेकाही रहस्यमयी बुकमार्कहरू - Samudrapari.com
लेखक : अइरी सुगीहारा, अनुवादक: सन्जिब चौधरी
३५८० पटक हेरिएको
पाउनु भएको छ भने तपाईंमात्र एक्लै हुनुहुन्न। प्रयोग गरिएका किताबमा अनौठा बुकमार्क विश्वभरि भेटिन्छन्। “२८ सेकेण्डमा अद्भुत व्यक्तिगत प्रतिभा” का नाभेर मातोमे नाम प्रयोग गर्ने एक व्यक्तिले आफ्नो व्लग पोष्टमा जापानमा केही यस्ता बुकमार्कका अभिलेख राखेका छन्।
मैले अन्त्यमा बुक अफमा फेला पारेको ओत्सोइचिको किताब समर , फयारवार्क एण्ड माइ डेड बडी घर फर्कदा ट्रेनमा पढी सिध्याए। लेखकले अत्यन्त हिंसात्मक कुराहरूलाई फरक ढंगले वर्णन गरेका छन् र यसको अन्त्यले मलाई रक्ताम्मेबाट चियाउन बाध्य गरायो, तर सबभन्दा डरलाग्दो अन्तिम पृष्ठहरूमा भएका डूडल (रेखाचित्र) थियो।
ओहो, मैले बुक अफमा किनेको डोग्रामाग्राको यो प्रतिमा केही छ। यसमा हेल्लो किट्टी (सन्नियो) बुकमार्क रहेछ। र यस बुकमार्कमा साना उच्चारण गाइड भएका पढ्न मुस्किल अक्षरहरू रहेछन्। युमेनो क्युसाकुका अतियथार्थवादी जासुसी उपन्यास पढ्नेमध्ये म चाहीँ आफ्नो खुशी लुकाउन सक्दिन ! प्रयोग गरिएका किताबहरू अति राम्रा हुन्छन्!
ブックオフで買ってきた108円均一本に4千円挟まってた。 しかし、なぜに新札と旧札？ まぁ 得した。